Semalt Expert Anopa Inotsvaga Injini Ongororo Ongororo
Kusati kwasvika webhu hutsva, pane injini dzekutsvaga iyo inonyanya kushanda pakubatsira vashandisi vepaIndaneti kuti vawane ruzivo rwekuda kwavo paIndaneti. Purogiramu dziripo dzakadai se "Archie" uye "Gopher" dzinounganidza ruzivo uye dzakachengetedza ruzivo pamusoro pemasevhisi akabatanidzwa neIndaneti.
Michael Brown, nyanzvi yepamusoro kubva kune Semalt , anogovera munyaya yezvimwe zvinhu zvinokurudzira zvichakubatsira kukurudzira SEO campaign.
Nzira dzekutsvaga injini dzinoshanda sei
Kutsvaga injini zvakanyatsotarisana netsitsi dzewebhu kuti dziwane zvinyorwa uye mafaira kubva pawebhu - gestion pointage. Webhuplers vanoshanda pakushandisa mapeji ose aripo anowanikwa pawebhu uye kuvaka runyorwa rwemashoko nemapurogiramu kuburikidza nehutano hunozivikanwa sewebhu kutamba.
Vashandisi veWebhu vanotanga kuunganidza mashoko kubva pamapepanhau anonyanya kushandiswa uye mavhareji ane migwagwa yakakwirira. Nekushanyira nzvimbo yekunakidzwa, tsvina dzinotevera mazano ose mukati mewebsite nekunyora mazwi ose pamapeji avo.
Kuberekwa kweGoogle Search Engine
Google ndeimwe yepamusoro-yakatsvaga injini dzekutsvaga dzakatanga pamusoro pechikoro chepamusoro. Maererano nekusunungurwa kwakaitwa maererano neGoogle yakagadzirwa sei, Lawrence Page naSergey Brin vanoreva kuti yekutanga maitiro akavakwa kuti ashandise vaviri kana vatatu vakwegura webhupu nenguva. Chikwata chimwe nechimwe chakagadzirirwa kuchengetedza kushamwaridzana kwemasanganisi 320 kune maWebhu anoshanda kamwechete.
Google inotora misoro iyo iyo yakashandisa magadziro mana, uye sarudzo yavo inogona kudarika mapeji makumi mapfumbamwe nemaviri pamusi wechipiri. Munguva iyoyo, urongwa hwacho hwakagadzira anenge makirobyte 600 emishumo kwechipiri. Chekutanga Google maitiro akashanda pakupa mamwe ma URL kune spider web kuburikidza ne server..Kuti kuderedza nguva yakawanda inotorwa vasati vashandisi vekuIndaneti vawane zvinyorwa uye mapurogiramu, Google ine Domain Name Server (DNS) yavo.
Nokuona uye kuongorora peji re HTML, Google yakataura pamusoro pemutauro wemashoko mukati peji, uye nzvimbo chaiyo yemashoko. Mashoko anoratidza meta tags uye zvinyorwa zvinyorwa zvakaiswa mberi panguva yekutsvaga vashandisi. Girasi yeGoogle yakagadzirirwa kunyora mashoko ekukosha zvakanyanya kunze kwekusanganisira zvinyorwa "the," "a," ne "an". Zvisinei, vamwe vanogadzira webhutori vanotora nzira yakasiyana yekutarisa mazwi akadai kana achienzaniswa neGoogle.
Kuita chiitiko chinotsvaga chakanaka, Lycos akashandisa nzira yekutsvaga mutsara unowanikwa mumata tag uye kuisa mashoko ekutanga zana anoshandiswa. Kana zvasvika kuna AltaVista, nzira yacho yakasiyana zvachose. Nhamba yekutsanangurira inosanganisira shoko rimwe nerimwe rinowanikwa pane peji, kwete kutaura zvinyorwa "a," "a," uye "the".
Maererano neBoolean operators, injini inotarisa pamashoko nemashoko sezvavanopinda nemushandisi. Kutsvaga kwechokwadi kunobatsira pakubvisa kutsvakwa kusingadi kunobatsira kuwana mhinduro yakanakisisa paWebhu. Kutsvaga-kutsvaga kutsvaga kunokosha zvikuru kana zvasvika pakutsvaga ruzivo. Iyi tsvakurudzo inoshandisa pakushandisa kuongororwa kuongororwa pamapeji ari nemitsara yaunofarira.
Zvinokonzera meta tags pakutsvaga kwewebhu
Meta tags inobata basa rinokosha kana richiuya kune kugadzirwa kwezvinhu . Meta tags inobvumira vatengesi vewebhu kuti vatsanangure kushandura mazwi makuru nemitsara kuti inyore. Tsangadzi dzinoshandisa meta tags dzisingatauriki nehuwandu uye zvakasiyana. Kukosha kwemata tags hakugoni kubviswa. Vanotora chikamu mukutsanangurwa kwemashoko akakodzera anofanana nekutsvaga kweshandisi.
Webhuni dzekutsvaga injini dzinoshanda kuburikidza nekuderedza nguva inoshandiswa kune vekutsvaga paIndaneti kuwana zvinyorwa uye mapurogiramu emuchina. Munguva yakapfuura, kuwana ruzivo rwezvakakosha uye mapurogiramu kubva pawebhu zvakaratidza kuti waifanira kuziva kuti Veronica naArie vakashanda sei. Munyika yanhasi, nhamba yakawanda yevashandisi vepaIndaneti inogadzikana zvachose kuWebhu, chinhu chinokosha chakakonzera kukura kweenjini dzekutsvaga.